Coctail raashin loogu talagalay Galliano L'Autentico Liqueur
Liqueurs Cuntada Talyaaniga
Waa maxay Galliano L'Autentico Liqueur?
Macmacaan, Luqad Dahir ah oo Ku Fiican Cuntada Ku xigta
Galliano waa caan ah dhirta caan ah oo leh midab jaalle ah oo dahabi ah oo loo isticmaalo noocyo kala duwan oo cocktails ah waana in ay noqdaan kuwo nadiif ah oo ku yaala baararka si fiican u wareegsan . Waxaa loo isticmaalaa cuntooyin coktail ah oo caan ah oo ay ku jiraan Harvey Wallbanger , taas oo ahayd mid culus oo soo wajahday 1970-yadii waxaana lagu arkay xiiso dib loo cusbooneysiiyay.
Galliano L'Autentico ayaa la soo saaray tan iyo 1896-dii Livorno, Talyaaniga. Arturo Vaccari wuxuu abuuray asxaabtiisa cusub ee loo yaqaan 'juseppe Galliano' kaas oo noloshiisii ​​ku jiray dagaalkii Italia-Abyssinian (1895-1896).
In kasta oo tallaalku uu abuuray qashinka inuu noqdo ' dhadhankiisa oo dhan ' waxaa la yiraahdaa wuxuu ku saleysnaa mashiinka guriga lagu ciyaaro ee Galliano.
1989kii, Galliani waa la bedelay ka dib markii uu soo iibsaday Remy Cointreau, waxaana loo magacaabay "Galliano Vanilla Liqueur." Ka dib markii ay iibsadeen Lucas Bols, dib u habeyntii ayaa wax ka beddelay wixii la soo iibiyay ee '' asalka ah 'iyo calaamadahii la bedelay Galliano L'Autentico (" The Original ").
Galliano ayaa weli soo saara Galliano Vanilla Liqueur (30% ABV ama 60 cadeyn). Tani waa bedel weyn oo loogu talagalay Navan la joojiyay ee noocyo kala duwan oo cocktails ah ama wax calaamado ah oo u yeeraya si fudud 'vanilla liqueur'.
Galliano waa mid ka mid ah liisaska dhirta badan oo leh qashin khaas ah iyo qarsoodi ah. Waxay isticmaashaa isku-dhafka qiyaastii 30 xawaashyo Mediterranean ah iyo dhir udgoon waxayna u yaqaanaan baayacmushtarka vanillada iyo dabada.
Waxaa ku jira dahabka dahabka leh ee dahabiga ah, waa qori, qorfe, juniper, dabeylaha, yaraanta mooska, qashinka, xiddigta xiddigga, iyo vaniljiga. Waxay sidoo kale ka shaqeyn kartaa wax kasta oo 'vanilla liqueur' cuntooyinka cabitaanka, inkasta oo ay ku dari doonaan waxyaalaha dheeraadka ah ee dhadhanka ka baxsan vaniljiga. Tani waxay abuuri kartaa qaar ka mid ah cocktails aad u xiiso badan.
Dhalada Dhuxusha Galliano
Waxyaabaha kale ee ka hadlaya Galliano waa dhererka dhalada.
Bartenders kuwaas oo soo bandhigay dhammaantood waa kuwo aad u yaqaan caqabadda.
Waa dhererasho 18 inch oo dhererkeedu sarreeyo marka la barbardhigo qashinka kale ee khamriga ee shelf. Sababtan awgeed, waxaad badanaa arki doontaa dhalada lafdhabarka ah ee Galliano oo taagan durbadiiba meesha kaliya ee dhabarka dambe ee qabta.
Isticmaalidda Galliano ee Koktagar
Galliano waa dhadhan riwaayad fantastik ah oo loogu talagalay cocktails iyo qoyskeeda dhirta gaarka ah ayaa adkeynaya bedelaadda. Vanilla-ku wuxuu ku qoran yahay talooyin caleemo leh iyo geedo kale oo si fiican isku dhafan leh leh dhadhan kasta. Waxa ugu wanaagsan marka la siiyo fursad ay ku iftiimiso maaddooyinka kale.
Galliano waa midabka dahabka ee dahabiga ah ayaa sidoo kale isha ku haya magaca noocyada cabitaanka cabitaanada badan ee loo isticmaalo gudaha. Kuwaas waxaa ka mid ah Cadillac Golden , Golden Dream , iyo Gold Mine , iyo kuwo kale. Markaad magac u sameyso cabitaankaaga Galliano , waxa laga yaabaa in aad ka fikirto inaad raacdo kaddibna ku dar 'dahab' ama 'jaalle'.
Marka aad bilowdo inaad isku dhafto Galliano, waxaad arki doontaa in ay tahay wax la yaab leh. Dabcan, si fiican iskula qasmaan voodka sida aan ku aragno Harvey Wallbanger, inkasta oo aad ka arki doonto qoob-ka-ciyaarka Freddy Fuddpucker in yar oo xiiso leh. Wareegga xajka ah ee jilicsan, waxaa jira khadka la yiraahdo " Blind Pilot Cocktail" , kaas oo u diidaya liishur leh saliidda macaan iyo bourbon.
Galliano waxaa sidoo kale loo isticmaalaa qaar ka mid ah kubadaha quruxda badan. Waxaa jira dhadhanka dhirta, dhadhanka kulaylka ah ee Birdda Huruudda ah iyo kareemka delicious ee Cappuccino Golden kaas oo ka muuqda vodka espresso. Mar labaad, waxaad isku dayi kartaa inaad iskudheelo sida Root Beer Float ama Jello shaandheeyaal ah kuwaas oo la mid ah kuwa la yiraahdo Candy Corner-ka ah ee aan ku aragno Halloween kasta.
Iyadoo dhalada Galliano ku jirta bararkaaga, waxaa laguu balan qaadayaa inaanan waligaa caajisin.
Ku saabsan Galliano L'Autentico Liqueur
Liquure geedaha talyaaniga ah oo isticmaalaya 30 xawaare, dhir udgoon, oo lagu daro midab jaalle ah oo dahabi ah.
Soo saarey iyo soo dejiyey Lucas Bols ee Amsterdam, Netherlands
42.3 boqolkiiba aalkolo ayaa loo isticmaalaa (84.6 caddayn)
Suuqyada loogu talagalay qiyaastii $ 35 ee dhalo 750ml ah.
Sidaad u Sameyn laheyd Nafaqadaada Talyaaniga ee Talyaaniga (Amaro Alle erbe)
Sidee loo sameeyaa Rooti
Cuntada Japanese Cocktail
Talooyinka Grand Marnier®, Talooyin, iyo Bedelaada
Sidee loo sameeyaa tallaalada loo yaqaan 'Candied Candied'?
14 Digaag Casseroles ah oo ku habboon cuntooyinka maalinlaha ah
The 5 Woollada ugu fiican ee lagu iibsado 2018
Spinach, Feta iyo Salad Caano ah oo Dhiig leh dharka Orange Sumac
Bariga Bariga Dhexe
Sidee loo sameeyaa Caanaha?
Beer ee digaag Butt
Bariisyada Spice Raisin Iyadoo Icing
Shan ka kooban Cuntada
Grilled Cheese iyo Taleggio Truffled Trashled iyo Blash Blossoms
Sida loo Isticmaalo Leftover Challah
Pyrat Rum Review: XO Reserve iyo Cask 1623
Biyaha & Waxyaabaha Qalabka ah
Ingiriis Cucumber iyo khudaar joogto ah
Vegan Best Vegan Dufan aan Caano ahayn
10 Kuleylaha fudud ee kulaylka Berry ee Berry